Manazava ny fanehoan-kevitra momba ny fampiasana ny mailaka Google Mailup ao amin'ny Transactional Emails
Ny mari-pamantarana E-mail dia voafaritra ho endrika fanehoana an-tserasera izay mahatonga nyNy karazana mailaka sasany dia mampiseho kokoa ny votoaty. Ny fisoratana anarana sy ny fandaminana ny mari-pamantarana maimaim-poana dia hodia manome fahafahana anao hanangona angona fanampiny ary hahatratra mpanjifa amin'ny fampiharana Google toy ny Kalandre na Inbox.
Eo amin'ny sehatry ny e-varotra dia midika izany fa ny fandefasana sy ny fanamafisanaNy fampandrenesana dia mety hikaroka manokana ao anaty boaty mailaka, izay manatsara ny traikefan'ny mpampiasa - ltc insurance provider ratings. Jack Miller, manam-pahaizana Semalt Ny Services Digital dia manazava ny endriky ny fampiasana marika mailaka.
Fanamarinana mailaka ho an'ny fanamafisana orina
Ity ambany ity ny ohatra momba ny Linking Data (JSON-LD) izay manomboka amin'ny script HTMLNy endriky ny endrika "application / ld-json":
Ny dingana manaraka dia mampiseho pairaly fanampiny izay mizara ny angona amin'ny rafitraizay midika hoe fampahafantarana voazanaka:
Na dia tsy mahalala an'i JSON aza, dia tokony ho mora ny mahatakatra izanyolona iray dia nividy "vokatra miavaka" avy amin'ny "SomeDistributor.com" ho an'ny $ 60.
Ilaina ireto toetra manaraka ireto ho an'ny mari-pamantarana E-mail mba hiantsoana fanamafisana:
Laharana nomerika - manondro ny famantarana ny mpivarotra
PriceCurrency - ampiasain'ny format 42 -34 (ISO) 4217
Ny mpivarotra - no anaran'ny fikambanana na olona
Ny soso-kevitra ankasitrahana - dia ahitana ny vidiny, ny sokajy, ny sokajy ary ny ankamaroan'ny vokatra novidina
Email Markup dia manana karazana fanolorana sy azo ekena ihany koafampandrenesana fanamarinana mividy.
Fanamarinana mailaka ho an'ny fampandehanana fampandehanana
Ny fampandrenesana fandefasana dia azo ekena amin'ny alalan'ny fanampiana na JSON-LD na microdataho an'ny template HTML mailo aseho eto ambany ohatra:
Ny ohatra dia tsy ahitana afa-tsy ireo toetra ilaina, fa ny fampidirana ny mailakaMarika, marobe ny karazana fanampiny azo ampiana mba hanatsarana ny traikefan'ilay mpividy. Tafiditra ao anatin'izany ny adiresy URL sy ny laharana manarakaizay mamaritra ny fango mpanaraka ny mpanaraka ary mamorona rohy ao amin'ny Gmail na ny boaty Google.
Iza amin'ireo mpividy no hahita ny hafatra entinao?
Ireo mpividy ao amin'ny solosaina Google dia handray ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny fidirana an-tserasera.Hatramin'ny nandefasana olona maherin'ny 1 tapitrisa ny Gmail, manana fanamafisana goavana ny hafatra amin'ny Gmail.
Ny fangatahana ilaina
Ireo mpandidy voasoratra anarana dia afaka mankafy ny mailaka mailaka. Google dia mitaky ireto manaraka ireto hanoratana ny mpampiasa iray:
Authentication Message amin'ny fampiasana Framework Identification Mail na Fandaharan'asa Frame Policy
Mailaka maimaim-poana Mailup
Tokony ho ambany ny fitarainana momba ny heloka bevava
Tantara iray nandefasana mailaka an-jatony isan'andro tamin'ny adiresy Gmail
Ny hafatra rehetra dia tokony alefa avy amin'ny adiresy mailaka
Tsy maintsy manaraka ny torolalana napetraky ny Mpitantana Bulk Gmail
Ny mpanjifany voamarina dia mety ho mpanjifa sambatra. Hividy amin'ny aterinetofifandraisana amin'ny mpivarotra rehefa nomena sy nalefa ny vokatra. Ny ankamaroan'ny mpivarotra matetika mandefa fanamafisana feno syfampandrenesana mailaka famandrihana. Na dia izany aza, raha misy orinasa lehibe na maoderina, mampiditra betsaka ny tahiry voafantinaNy marika dia mety ho tsara kokoa amin'ny mailaka ho an'ny mpividy sasany.